भोली वाट ब्युटि पार्लर,सै लुन र होटल बाहेकका अन्य पसल तथा ब्यवसाय खोल्न पाउने !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/भोली वाट ब्युटि पार्लर,सै लुन र होटल बाहेकका अन्य पसल तथा ब्यवसाय खोल्न पाउने !!
विराटनगर महा नगरमा ब्युटि र्लर,सैलुन र होटल बाहेकका अन्य पसल तथा ब्यव`साय खोल्न दिने निर्णय भएको छ । विराटन`गर महा नगर क्षेत्रमा विहान देखि दिउसो १२ बजे सम्म पसल खोल्न पाइने छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा कोभिड क्राइ`सिस मेनेजमेन्ट कमि`टीको बुधवार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बजार क्षेत्रमा सामाजिक दुरी कायम राखेर सुर`क्षित रुपमा ब्यापार ,व्य वसाय सन्चालन गर्ने गरी ब्य`वस्था मिला इएको विराट`नगर महानगरका मेयर भीम पराजु`लीले जानकारी दिए । यसको प्रत्यक्ष अनुगमन विराट`नगर महान गरपालिका र जिल्ला प्र`सन कार्यालय मोरङले गर्ने छ । यो निर्णय संगै विराट`गरमा आन्दोलित रहेका व्यव`सायीहरुले खुसी ब्यक्त गरेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा फेरि निषे`धाज्ञा !